Zavaboahary terestrialy: toetra, karazany, zavamaniry ary biby | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 07/07/2021 11:00 | Tontolo_iainana
Eto amin'ny planetantsika dia misy karazan-javaboahary maro karazana, na tontolo iainana anaty rano na an-tanety na an-habakabaka mihitsy aza. ny ekosistia terestrialy toerana ifanarahan'ny singa biôlika sy biôlika izany. Ny substrate lehibe mivoatra ny fiainana dia ny tany nipoitra. Ny toetra mampiavaka ny mpanelanelana tsy maintsy anamboarana dia ny tany ho fanohanana ara-batana. Ity ny sakafo sy ny toeram-ponenana ilain'ny karazan'aina mba hahavelona azy ireo ary manome ny rojon-tsakafo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny fiasa ary ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana eto an-tany.
1 Toetra mampiavaka ny tontolo iainana ety an-tany
2 Karazan-javaboahary terrestrial
2.2 ala kesika
2.3 Ala mando
2.4 Ekosistia terrestrial: steppe
2.5 Ala mando
2.6 Moor sy savanna
Toetra mampiavaka ny tontolo iainana ety an-tany
Ny tontolon'ny habakabaka malalaka dia mametraka andian-toetra maromaro amin'ireo ecosystems ireo, izay miteraka endrika manokana amin'ny fampifanarahana amin'ny zavamiaina. Indrindra satria misy fiantraikany mivantana amin'ny tontolo iainana terrestrial ny toetrandro.
Ny fiovana lehibe indrindra dia vokatry ny anton-javatra toy ny mari-pana, ny fiovan'ny tafiotra sy ny hamandoana. Izany rehetra izany dia miharihary eo amin'ny tontolo iainana ny fahafaha-miaina ny zavamiaina. Ny zava-manan'aina amin'ny tontolo iainana ety an-tany dia mivelatra amin'ny medium mifangaro amin'ny rivotra. Izy io dia ambany matevina, mora tohina amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny toetr'andro, ary mifehy ny fahafahan'ny zavamiaina.
Ireo tontolo iainana ireo dia mivoatra amin'ny fipoiran'ny faritra terestrialy, izay miteraka fepetra manokana amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana. Ankoatry ny fanomezana fanohanana ara-materialy, ny tany koa dia maneho ny famatsian-drano sy ny otrikaina an'ireo mpamokatra voalohany ary mamorona tontolo iainana manokana.
Ny tontolon'ny habakabaka dia voakasiky ny toetr'andro, izany hoe ny fiovan'ny singa sy ny singa toy ny mari-pana, ny rotsakorana ary ny rivotra. Miovaova be ny toetrandro amin'ny fotoana, latitude ary haavony mandritra ny taona, miteraka fahasamihafana amin'ny fitambaran'ny tontolo iainana manokana.
Mampiroborobo ny fanamorana ny karazan-java-tsoa hihaona amin'ny filàna isan-karazany amin'ny tontolo terestrialy isan-karazany. Avy amin'ny ranomasina ny fiainana, ka tsy maintsy mamorona paikady isan-karazany ny zavamiaina mba hifanaraka amin'ny tontolo malalaka.
Mampiroborobo ny fanamorana ny karazan-java-tsoa hihaona amin'ny filàna isan-karazany amin'ny tontolo terestrialy isan-karazany. Avy amin'ny ranomasina ny fiainana, ka zavamananaina dia tsy maintsy mamolavola paikady isan-karazany hifanaraka amin'ny tontolo malalaka. Raha ny zavamaniry amin'ny maha mpamokatra voalohany azy ireo dia namorona tavy mekanika mamela azy ireo hijoro mahitsy izy ireo.
Izany dia satria an-tanety, ny atmosfera dia tsy manome ny fanampiana omen'ny rano hijanonana ho mahitsy. Namolavola rafitra radika maimaim-poana sy fitarihana rano koa izy ireo hahazoana sy hitaterana rano sy mineraly.
Toy izany koa, misy rafitra fifanakalozana solika amin'ny alàlan'ny ravina. Raha resaka biby, mampivelatra ny rafi-pisefoana avy amin'ny rafi-panaovana ny rivotra sy ny rivotra.
Miankina amin'ny karazana toetrandro manjaka sy ny zavamaniry ary ny biby mivelatra, misy karazana ekosistia terrestrial isan-karazany. Andao hojerentsika hoe iza no lehibe:
Ity biome ity dia fonenan'ireo tontolo iainana ety an-tany izay hita any amin'ny latitude avaratry ny avaratry ny tany na amin'ny faritra atsimo sasany. Mavesatra ny toetrandro, miaraka amin'ny mari-pana manakaiky na ambany 0ºC mandritra ny taona, ary misy sosona tany maharitra mangatsiaka.
Io dia mametra ny mety fivoaran'ny zavamaniry, izay lasa moss, lichens ary karazana ahitra sasany.
Any atsimon'ny tundra, ny tontolo iainana dia mipoitra anaty ala mikitroka na anaty ala. Ireo dia ala mikitroka lehibe nefa tsy misy fahasamihafana firafitra. Ny karazany dia samy hafa kokoa noho ny tundra, miaraka amin'ny biby mampinono lehibe toy ny renindry, amboadia, bera ary elk.
Ny latitude lavitra ny bao dia misy ekosistema ala matevina. Anisan'izany ny ala malalaka midadasika, ala mikitroka, ala mifangaro ary ala Mediteraneana. Ity farany dia hita amin'ny toetr'andro tena manokana ary voakasiky ny ranomasina, maina sy mafana amin'ny fahavaratra ary mangatsiaka amin'ny ririnina. Ny ala Mediteraneana dia tsy hita afa-tsy amin'ny morontsirak'i Pasifika amin'ny lohasaha Mediteraneana, Kalifornia ary Chile.
Any Afrika atsimo sy any atsimo andrefan'i Aostralia koa no misy izany. Ny ala midadasika malalaka dia zaraina amin'ny faritra maro any Eurasia sy Amerika Avaratra. Ny karazan-javamaniry dia misy ny hazo terebinta, birch ary beech. Ahitana kesika, hazo sedera, sipres, cemara, ary zenifera ny konifera. Na dia miaina karazana maro hafa toy ny amboadia, bera ary serfa aza ny biby.
Ekosistia terrestrial: steppe
Ireto tontolo iainana ireto dia maniry eo amin'ny tany fisaka misy toetr'andro mangatsiaka sy maina, eo anelanelan'ny ala mikitroka na ala mikitroka sy ala mikitroka. Mampiavaka azy ireo ny karazan'ahitra sy bararata manjaka ary kirihitra vitsy.
Nozaraina tany amin'ny kaontinanta Eurasia izy ireo, indrindra any amin'ny faritra sasany any Siberia sy ny South Cone any Amerika atsimo. Anisan'ireo ekosistema any Eurasia ireo, misy soavaly môoliaka na soavaly Przewalski ary antilopa saiga.
Ao anatin'ny firafitr'ity biome ity, ny tontolo iainana dia manana ny fahasamihafana lehibe indrindra, miaraka amin'ireo ala tropikaly mando sy ala maina ao amin'ny faritra ekolojika. Ny ala mando dia misy ala be rahona na be rahona ary ala mafana mafana.
Amin'ny alàlan'ny fandinihana ala mikitroka manokana, toy ny ala tropikaly any Amazon ihany, no ahafahana manavaka ny fahasamihafan'ny tontolo iainana. Anisan'izany ny renirano várzea na rano fotsy, ny tontolo iainana anaty ala anaty rano, renirano mainty ary ala fasika fotsy igapo na ala anaty rano.
Moor sy savanna
Ny páramos dia ny tontolo iainana maniry any Alpes tropikaly any Amerika sy Afrika, mandroso indrindra any Andes, eo anelanelan'ny 3.800 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina sy ny fetran'ny lanezy maharitra. Mampiavaka azy ireo ny fananana kirihitra ambany sy salantsalany ary Izy ireo dia manan-karena amin'ny karazany toy ny zavamaniry, rhododendrons, ary legume. Misy karazana endemika avo lenta eto, izay tsy manam-paharoa amin'ireo faritra ireo.
Zavamananaina maro no zaraina ao amin'ny savanna, ary ny matroka fototra dia lemaka rakotry ny ahitra. Na izany aza, misy ny tontolo iainana isan-karazany savanna, ao anatin'izany ny savanna tsy misy ala sy ny savanna ala. Amin'ity farany ity dia miavaka ihany koa ny tontolo iainana ary miorina amin'ny karazan-kazo lehibe, angamba ny hazo palma. Izy dia ekôzistia mampiavaka ny savanna afrikanina.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe ekôstôsy terestrialy sy ny toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ekosistia terrestrial
Greenwashing: inona izany ary ahoana no hamantarana azy?
Inona ny masoandro